कति हुन्छ मान्छेको अधिकतम आयु ? यस्तो भन्छ अनुसन्धान - Khabar Break
मानिस कति वर्षसम्म बाँच्न सक्छ ? यो निकै जटिल प्रश्न हो। सामान्यतया मानिसको आयु एक सय वर्ष मानिँदै आएको छ तर कतिपय मान्छे त्यो भन्दा धेरै वर्षसम्म जीवितै रहेका पर्याप्त उदाहरण हामीसँग छन्।
यो कुराको खोजी गर्ने क्रममा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्ट) को प्रयोग गरेर अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वयंसेवकहरूको स्वास्थ्य डेटा विश्लेषण गरेका छन्। अध्ययनले मानव जीवनको लागि दुई महत्त्वपूर्ण विषय भेट्टायो – जैविक उमेर र लचिलोपन। पहिलो तनाव, जीवनशैली र जटिल रोगहरुसंग जोडिएको छ। अर्को व्यक्ति तनाव प्रतिको प्रतिक्रिया पछि सामान्य परिस्थितिमा कति छिटो फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ।
त्यसो गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरू ‘वृद्धावस्थाको गति’ बुझ्न सक्षम भए। जसले पत्ता लगाए कि मानव शरीर अमर हुँदैन। साइन्टिफिक अमेरिका डटकममा प्रकाशित एक लेख अनुसार सो अध्ययनले देखाए अनुसार मान्छे १२० देखि १५० वर्ष सम्म बाँच्न सक्छ।
आनुवंशिकका हार्वर्ड मेडिकल स्कुलका प्राध्यापक डेभिड सिन्क्लेयरले उक्त अध्ययनमा टिप्पणी गर्दै भने ‘यो अध्ययनले मानिसको वृद्धि र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर हो जसले औषधिको विकास प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाएर मानिसको आयु बढाउन मद्दत गर्दछ।’
तर, सम्भवतः मानिसको अमरत्वको खोज यो नयाँ अनुसन्धानले चकनाचुर भयो। किनकि सम्पन्न मानिसहरू सधैँभरि जीवित नै रहनको लागि यस्तो खोजलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका थिए।